Ma tahay inaad isticmaasho Nofollow, Kafiil, ama Xiriirinta UGC? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Ma tahay inaad isticmaasho Nofollow, Kafiil, ama Xiriirinta UGC?
Ma tahay inaad isticmaasho Nofollow, Kafiil, ama Xiriirinta UGC?
Su'aasha maanta waxay ka timid Aishwarya oo ku nool Queensland, oo waydiisay:
"Ma lagama maarmaan ma tahay in la isticmaalo isku xirka Nofollow, Sponsored ama UGC (rel="kafiil", rel="raac"ama rel="nofollow kafaalo-qaado") Hadday haa tahay, midkee ka mid ah xidhiidhada sare ee wanaagsan in la isticmaalo."
Su'aal weyn, Aishwarya!
Haa, gabi ahaanba waa lama huraan inaad u adeegsato sifooyinkaan isku xirka dibadda.
Marka laga reebo US, UK, iyo EU mid kastaa wuxuu leeyahay sharciyo iyo xeerar u gaar ah oo ku saabsan baahida loo qabo in la shaaciyo, Google wuxuu leeyahay nooc u gaar ah oo wuxuu ku sheegay habraacyadooda, sidoo kale. Waa kan tusaale taas ka mid ah.
Google waxa kale oo uu ciqaabay dhawr sano ka dib gaar ahaan goobaha aan shaaca laga qaadin.
Waxaan ka hadlay sida Google u sheegi karo haddii aad ku jirto ama aadan shaaca ka qaadin qoraalkan.
Sababta oo ah waxaad wax ka weydiisay kuboonnada, gaar ahaan, waxaan u qaadan doonaa inaad tahay degel foojarrada oo ka jawaab xaaladdaada suurtagalka ah.
Waa kan sida aan kugula taliyo samaynta sifada.
Waxay u badan tahay inaad hesho komishanno ama lacag lagu siiyo.
Tani waxay la macno tahay inaad rabto inaad isticmaasho kafaala-qaadka sababtoo ah uma dhigaysid isku xirka halkaas si uu u fiicnaado.
Tan waxaa ka mid ah isku xirka xiriirka la leh, iibsashada warbaahinta, alaabada dib u eegista, iyo marka aad haysato koodka kuubanka gaarka ah ee loo isticmaalo in lagala socdo bogga.
Haddii aadan lacag sameyneynin oo aadan kaliya helin koodhadhka kuubanka oo aan faa'iido lacageed lahayn, ka dibna u dhaaf xiriiriye la socda, hana ka welwelin.
Waxaad u dhistay bogga gaarka ah ee dukaanka sababtoo ah waxaad ku kalsoon tahay bakhaarka si aad ugu soo dirto boggaga internetka iyaga.
Taas macnaheedu waa dukaanku waa la aamini karo oo waa inuu raacay xiriiriyeyaasha.
Waxaa jira xaalado badan halkan.
1. Haddii website-ka aad ku xidhan tahay aanu ahayn wax aad ku kalsoon tahay, markaa waa inaadan u dhisin bog kuuboonnada dukaankaas.
Weydii naftaada, "Maxaad ugu gudbinaysaa booqdayaasha mareegta dukaan aan la aamini karin?"
Wax macno ah ma samaynayso in iyaga lagu xidho, si fudud u tirtir boggaas intii aad isticmaali lahayd lasoco la'aan.
Haddii aad ku adkaysato inaad haysato bogga, markaa nofollow waa sax laakiin laguma talinayo.
2. Haddii xiriiriyadu aysan ahayn kuwa ku xiran, PR, ama warbaahin lacag ah oo aad ku dartay sababtoo ah heshiiska dukaanka ayaa mudan in la xuso, markaa raac waa habka saxda ah ee loo maro.
Tani waa sababta oo ah ma jirto dhiirigelin lacageed oo waxaad dareemeysaa in shabakadu tahay kheyraad wanaagsan oo loogu talagalay booqdayaasha boggaga internetka.
UGC & Kuubannada Isticmaaluhu Soo Gudbiyeen
Sida nofollow sare, tani waa xaalad:
Haddii boggu aanu sumad lahayn (ie: "Kuubannada Valentino") iyo kuubannada ay isticmaaluhu soo gudbiyeen, isticmaal UGC.
Haddii xiriirku noqdo xiriiriye xiriiriye dibadda ka baxa dhagsii shabakad xayeysiis ah, kafaala qaaday waa sax ee maaha UGC.
Haddii ay tahay isticmaale-soo gudbiyay oo uusan jirin xiriir xiriir la leh, ka dhig UGC.
Haddii ay tahay isticmaale-soo gudbiyay oo aad leedahay bog gaar u ah dukaankaas: isticmaal xiriirka gudaha ee la socda ee bogga dukaanka, xiriirinta la kafaala qaaday ee gujinta dibadda haddii aad leedahay xiriir xiriir la leh, iyo UGC haddii aysan jirin xiriir la leh ama lacag la bixiyay. xiriirka.
Xidhiidhada saamileyda ah
Kuwan waa in la kafaala qaadaa sababtoo ah waxaad ku dhejineysaa hadafka ah inaad kasbato komishan.
Waxaan rajeyneynaa in tani ay kaa caawineyso ka jawaabista su'aashaada ku saabsan shabakadaha coupons iyo kuwa isku xira sifooyinka la isticmaalo.
Haddii aysan taasi dhicin, fadlan xor u noqo inaad ila soo xiriirto si aan u eego mareegahaaga oo aan u fahmo xaaladda gaarka ah.
Waad ku mahadsantahay su'aasha!
Macnaha guud ee Xidhiidhada ka baxsan ee SEO ee darajada sare
Waa maxay sababta isku-xirayaashu ay muhiim ugu yihiin SEO
17 Qalabka Naqshadeynta Bilaashka ah ee 2021